Plex.Earth misintona sary avy amin'ny Google Earth Moa ve tsy ara-dalàna? - Geofumadas
Janoary, 2012 AutoCAD-Autodesk, Google Earth / Maps
Hitanay talohan'ny fandaharana sasany izay naka sary ny sary avy amin'ny Google Earth. Georeferensy na tsia, ny sasany tsy misy intsony toy ny StitchMaps y GoogleMaps Downloader.
Ny iray andro dia nanontany ahy ny namako iray raha manenjika ny politikan'i Google ny zavatra nataon'i Plex.Earth avy amin'ny AutoCAD.
Inona ny fepetra momba ny Google
(c) ny famoahana, fitantanana fiaramanidina na fampiasa mitovy amin'izany. Tsy avela hampiasa izany Software tsy misy izay mamela ny mpampiasa na olon-kafa hahazoana fahafaha-midadasika be dia be na fametrahana karazan-tsakafo feno latitude sy longitude. Ny mpampiasa dia tsy tokony hampiasa ny Software amin'ny fanontana na fandefasana malalaka ny sary, data na zavatra hafa.
Toy izao ihany koa amin'ny teny hoe Google Maps:
«Azonao atao ny maka ny votoatiny amin'ny fampiasana derivative tsy misy ifandraisany amin'ireo vokatra, toy ny fanovana bebe kokoa ao anaty drafitra hafa, famoahana Desktop, na GIS fampiharana. "
Ny fangatahana dia natao tamina dinika maro samy hafa, na ESRI na Google Earth, fa ny loharanom-pahalalana tsara indrindra ho anay, satria ny PlexScape dia mpamorona nomen'ny AutoDesk fahefana dia izay voalaza ao amin'ilay tranokala ihany, raha vao nisy mpampitohy. any amin'ny laboratoara. Na dia tsy hevitry ny AutoDesk ofisialy aza ny bilaogy dia mamela ireo mpampiasa mitazona ny fisafotofotoana fotsiny amin'ireo fanambarana voalaza etsy ambony ireo.
Soctt Shpeppard nisintona indray fa hoy ny ara-dalàna no hanazava anjara, izay nitanisa ny orinasa manana fanekena Google ny fampiharana ny fampandrosoana ny API ny Google Earth izay ahitana ny zavatra Civil3D sy AutoCAD Map mahatonga fanafarana ny nomerika sy ny modely sary.
Autodesk dia manana fahazoan-dàlana avy amin'i Google izay ahafahan'i Autodesk hampihatra ny Google Earth API amin'ny vokatra Autodesk; Na izany aza, ny tsipiriany momba ny fampiharana sy ny fepetran'ny fahazoan-dàlana Autodesk amin'ny fampiasana teknolojia fahatelo dia tsiambaratelo, ary tsy afaka ny hizara izany vaovao izany amin'ny mpanjifa izahay.
Ireo mpampiasa farany izay te hampiasa ny sarin'ny Google Earth ivelan'ireo vokatra Autodesk (anisan'izany ny fampidinana izany ho azy manokana) dia tsy maintsy manana ny fahazoan-dàlany manokana avy amin'ny Google ary manaiky ny fepetra Google ampiasaina.
Manazava ihany koa fa ny endriky ny endriky ny endriny dia tokony atao amin'ny vokatra avy any, dia efa andraikiny manokana ary mitaky fahazoan-dalana mivantana miaraka amin'i Google hanaraka ireo teny ireo.
Noho izany, satria Plex.Scape dia fampandrosoana amin'ny fahafahan'ny AutoCAD, dia voarakitra ao anatin'ity fifanarahana ity izy. Mazava ho azy, ny tombony azo amin'ny Plex.Earth dia ny tsy hampiasan'ny Civil3D an'io ho azy, fa ny AutoCAD ihany no mety LT. Ary ny sary dia tonga amin'ny loko ary misy safidy hisafidianana ny vahaolana ho an'ny fisintomana.
Araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, ity dia iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra mpampiasa ny medium Hispanic. Plex.Earth dia azo vidiana mivantana avy amin'ny tranokala PlexScape na miaraka amin'ny mpivarotra AutoDesk. Raha ny momba an'i Amerika Latina dia mitady mpaninjara ao an-toerana izy ireo.
Previous Post«Previous Piraty rindrambaiko, lohahevitra tsy misy farany
Next Post Sarintany malalaka manerana izao tontolo izaomanaraka »
4 Mamaly ny "Plex.Earth misintona sary avy amin'ny Google Earth. Tsy ara-dalàna ve izany?"
Tsara ny SAS
Fede hoy izy:
Nisedra ny SAS.Planet izy ireo?
Eny, ara-dalàna. Eny, atao eo ambanin'ny fifanarahana izay nataon'i AutoDesk amin'ny Google.
ped hoy izy:
TSY AZO AMPITSASTA TSARA ve sa tsia?